Fianarana Ambaratonga Ambony
Fiofanana ahazahoana Certificat
Fitantanam-bahoaka sy vola
Fivarotana sy varotra iraisam-pirenena
Fitantanam-bola sy kaonty
TONGASOA ETO AMIN'NY TRANOKALAN'NY INSCAE
INSCAE dia efa hita amin'ny alalan'ny teny an-tserasera ara-aterineto. Amin'ity indray mitoraka ity, dia efa manana ny tranokalany manokana izy. Ity tranonkala ity dia natao ho an'ny mpanapa-kevitra, mpiara-miasa, orinasa, ray aman-dreny, mpianatra ho avy, fianakaviana INSCAE... ho an'ny rehetra.
Izany dia ahafahan'ny mpitsidika mianatra momba ny fiainan'ny INSCAE: ny asa fampianarana sy ny fikarohana, ny vaovao, ny fiarahamonina
Noho izany dia fitaovam-pifandraisana ny tranonkala dia ho fenoina sy hihatsara tsikelikely.
Hira fanevan'ny INSCAE